Fumana iqhinga lokuguqula nasiphi na isitya sibe sisitshisi samafutha | Bezzia
UToñy Torres | 11/01/2022 20:00 | Isibonelelo sokutya, Ukutya
Ukunciphisa umzimba kuyimfuneko yokongeza i-caloric deficit, kunye nokutshiswa kweekhalori. Omnye ngaphandle komnye akukho nto, kuba ukunciphisa umzimba ngendlela ecacileyo kunye nenempilo kudlula isixa sabo bobabini. Ngoku ngendlela efanayo ukutya ukutya akuthethi ukuzilambisa, ukwenza imidlalo akuthethi ukuzibulala ukuze uziqeqeshe kangangeeyure ezingapheliyo suku ngalunye.
Into omele uyazi kukuba uqeqesho olusebenzayo lukunceda utshise amanqatha kwaye unciphise umzimba. Kanye kunye nokubandakanya okunye ukutya ekutyeni kwakho, kukuvumela ukuba ujike nasiphi na isitya sibe sisitshisi samafutha. Ngenxa yokuba kukho ukutya okunempembelelo emzimbeni kunye kubo siza kukhonza ukufezekisa injongo yethu yokunciphisa umzimba. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ngawaphi amahlakani aza kukunceda ufezekise iinjongo zakho?
1 Indlela yokuguqula nayiphi na isitya kwisitshisi esinamafutha
1.1 Yongeza ingcambu ye-ginger kwiitya zakho
1.2 Isaladi ngeviniga yokugqoka
1.3 Yongeza iiprawn kwiiresiphi zakho zepasta
1.4 Zongeza izitya zakho ngamafutha atshisa iziqholo
Indlela yokuguqula nayiphi na isitya kwisitshisi esinamafutha
Okunye ukutya kuqulethe izinto ezenza umphumo we-thermogenic emzimbeni, okuvumela ukuba utshise amanqatha, ngakumbi kwindawo yesisu. Ezinye izinto zikunceda ukuba unciphise umzimba, njenge abo bakhawulezisa imetabolism, umzekelo. Ezi zinto zifumaneka ngokwemvelo ekutyeni. Oko kukuthi, ukuba uzifaka kwisidlo sakho rhoqo, ungaguqula phantse nasiphi na isitya sibe sisitshisi samafutha.
Yongeza ingcambu ye-ginger kwiitya zakho
Ingcambu i ginger Inamandla ngokumangalisayo, kuba ngenxa yeempawu zayo ezininzi ziluncedo kakhulu kwimpilo. le yenye yezi ukutya okunefuthe le-thermogenic emzimbeni, oku kuthetha ukuba ukuba wongeza ijinja kwisidlo sakho, uya kutshisa amanqatha ngokukhawuleza nangempumelelo. Ijinja isebenza ngendlela efanayo nokunye ukutya okufana netshilisi, enyusa ubushushu bomzimba wakho kwaye ikwenza utshise amanqatha.
Yongeza ijinja kwiipurees zakho zemifuno kunye neekhrimu, kwaye unokhetho oluninzi izidlo ezisempilweni onokuthi kwakhona ulahlekelwe ngamafutha ngaphandle kokuqaphela. Unokongeza ezinye izithako kunye nokwandisa umphumo, njenge-turmeric okanye i-chili encinci, ukuba uyayithanda i-spicy.
Isaladi ngeviniga yokugqoka
Iviniga nayo inefuthe elinamandla lokutshisa amanqatha kwaye ngoko ke liqabane eligqibeleleyo kubo bonke abafuna ukunciphisa umzimba. Le nto inamandla kunciphisa ukufakwa kwamafutha, ukuze ukwazi ukuyisusa ngokulula. Thatha iisaladi ngeviniga yokugqoka yonke imihla, unokutshintsha iisaladi eziluhlaza kunye nabanye ngokusekelwe kwiimbotyi. Uya kuba nesidlo esipheleleyo esijike sibe sisitshisi samafutha.
Yongeza iiprawn kwiiresiphi zakho zepasta
Iiprawn, ezidityaniswe netshilisi encinci, zisisitshisi esinamandla samafutha kuyo nayiphi na iavokhado, kwaye zikwamnandi. Oku kungenxa iiprotheni ze-shrimp kunye nefuthe le-thermogenic ye-chilli pepper, yenza isiphumo esinamandla sokutshisa amanqatha. Ukuba wongeza kwakhona i-splash yelamuni, uya kuphucula ukusebenza kwesibindi.
Zongeza izitya zakho ngamafutha atshisa iziqholo
Iziqholo ezininzi zinefuthe le-thermogenic, oko kukuthi, zandisa ubushushu bomzimba kwaye zinceda ukutshisa amanqatha asekuhlaleni. Ukongeza, iziqholo zikuvumela ukuba ukonwabele izitya ezinencasa ngakumbi ngaphandle kokongeza iikhalori, kunye nokunciphisa ukusetyenziswa kwesodium. Ezinye zezona ziqholo ezithandekayo kulo mba i-curry, i-mustard, i-turmeric, okanye i-cayenne.
Ukufunda ukudibanisa ukutya kuyisitshixo sokukwazi ukutya yonke into ngendlela enempilo, ngelixa unokunciphisa umzimba. Ngenxa yokuba akukho malunga nokulamba, kodwa malunga nokufunda ukutya, ukuzondla ngezondlo eziyimfuneko ukuze umzimba usebenze ngokufanelekileyo. Konwabele ukutya, incasa kunye nezibiliboco zomhlaba, kuba okona kutya kutyebileyo kukushiyana kwezendalo.
Ngala maqhinga okuguqula izitya zakho zibe zizitshisi ezinamafutha, unokunciphisa umzimba ngokulula. Yenza eminye imidlalo rhoqo ukukhuthaza ukulahleka kwamafutha kunye nokunye. uya kuphucula izibonelelo zala mahlakani atshisa amanqatha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » ZeMpilo » Isibonelelo sokutya » Fumana iqhinga lokuguqula nasiphi na isitya sibe sisitshisi samafutha